कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार «
कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार
सुर्खेत-कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा रहेको कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिएको छ । अस्पताल नवनिर्मित भवनमा सरेसँंगै विशेषज्ञ चिकित्सक थपिएपछि जटिल रोगका उपचार तथा शल्यक्रिया लगायतका सेवा विस्तार गरिएको हो ।
अस्पतालमा स्थापनादेखि नै पहिलो पटक टाउकाको शल्यक्रिया सेवा सुरु गरिएको छ । जुन सेवा कर्णाली प्रदेशका अन्य कुनै पनि अस्पतालमा छैन । लामो समय संघीय राजधानी काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा सेवा पु-याएका न्यूरो सर्जन डा. निलमकुमार आएपछि पहिलो पटक न्यूरोसम्बन्धी शल्यक्रिया हुन थालेको हो । न्यूरो सर्जन डा. निलम प्रदेश अस्पतालमा आएको छ महिनामा टाउकोको २५ वटा, ढाडसम्बन्धी दुई र घाँटीसम्बन्धी एकवटा शल्यक्रिया गरिएको छ । अस्पतालले लेजर विधिबाट अप्रेसन सेवा पनि सुरु गरेको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले जानकारी दिए ।
यसअघि १५० शैय्या सञ्चालन गरेको प्रदेश अस्पतालले नयाँ भवनमा सरेपछि थप १ सय शैय्या बढाएर २५० शैय्याबाट सेवा दिइरहेको छ । यस्तै अस्पतालले बहिरंग सेवा अर्थात् ओपीडी सेवाको समय पनि बढाएको छ । यसअघि बिहान १० बजेदेखि ३ बजेसम्म दिने गरिएको ओपीडी बिरामी जाँच सेवा बिहान नौ बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म बनाइएको छ । शुक्रबार भने नौ बजेदेखि २ बजेसम्म सेवा दिइने छ । नाम दर्ता सेवा विहान ८ बजेदेखि नै दिन सुरु गरिएको छ ।
यस्तै अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा गरिएका नागरिकलाई प्राथमिकताका साथ छुट्टै फाँटबाट सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । जसले गर्दा सहजता भएको र सेवाग्राही पनि थपिएको बिमा फाँट इन्चार्ज रामप्रसाद भण्डारीले बताए ।
प्रदेश अस्पतालले गत आर्थिक २०७७-०७८ मा ५३ हजार ४५३ जनालाई ओपीडी र ८ हजार ९६३ जनालाई इमरजेन्सी सेवा दिएको छ । सोही अवधिमा ४ हजार ९४९ जना महिलाले अस्पतालबाट सुत्केरी सेवा लिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. विकास केसीले जानकारी दिए । डा. केसीका अनुसार अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक आएसँंगै शल्यक्रिया हुने संख्या बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा अस्पतालबाट २ हजार ४५७ अप्रेसन भएको डा. केसीले बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने एक हजार ९५२ वटा सल्यक्रिया गरिएको थियो ।
#विशेषज्ञ सेवा विस्तार